जाडोयाममा कस्तो सौन्दर्य सामग्री प्रयोग गर्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
जाडोको मौसम शुरु भएको छ । जाडोमा मान्छेको छाला सुख्खा हुने भएकाले यो मौसममा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा धेरैथरी सौन्दर्यका सामानहरु पाइन्छन् । तर यसको प्रयोगमा के–के ध्यान दिने र कसरी प्रयोग गर्ने ? भन्ने विषयमा स्टेला ब्राण्डका निर्देशक प्रदीप चावडासँग हामीले कुराकानी गरेका छौं । चिसोको मौसममा हाम्रो छालालाई कसरी सुरक्षित गर्ने ? भन्ने विषयमा चावडाले दिएको टिप्स ः
बजारमा स्टेला ब्राण्ड लोकप्रिय ब्राण्डको रुपमा रहेको छ । केरोटिन ट्रिटमेन्ट बजारमा टन्नै हुँदाहुँदै पनि धेरै केमिकल नभएको र स्वास्थ्यलाई समेत ध्यान दिएर बनाइएको ब्राण्ड भएकाले पनि यो ब्राण्डलाई धेरैले मन पराउने गरेका छन् । यसका ब्राण्डहरु बजारमा केही महँगा देखिन्छन् । तर विश्वासिलो र गुणस्तरीय सामानको प्रयोग गरिने भएकोले अन्य ब्राण्डको तुलनामा यो केही महँगो देखिन्छ । यद्यपि हाम्रो स्वास्थ्य र गुणस्तरलाई आधार मान्दा यो त्यति साह्रो महँगो पनि होइन । अनलाइनखबर बाट सभार